चीन NON-GMO पृथक सोया प्रोटीन कारखाना र निर्माताहरु ट्यानजिया
सोयाको शक्ति यहाँ छ हाम्रो पृथक सोया प्रोटीन पाउडरमा! तपाईको वर्कआउटलाई ईन-डेरी, गैर- GMO व्हे प्रोटीनको विकल्पको साथ ईन्धन गर्नुहोस्। यस उच्च-गुणस्तरको प्रोटीन स्रोतले मांसपेशीहरूको वृद्धि र विकासको लागि शाकाहारी र शाकाहारीहरूलाई आवश्यक एमिनो एसिड प्रदान गर्दछ। यो ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने कसैको लागि पनि आदर्श छ। पेय पदार्थ, ऊर्जा बारहरू, र अधिकमा पृथक सोया प्रोटीन पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्!
पृथक सोया प्रोटीन पाउडर कसरी लिने
पृथक सोया प्रोटीन पाउडर पानी, स्मूदी, र हिलाउँछन् जस्तै चिसो पेय पदार्थहरु मा आनन्द लिन सकिन्छ। निश्चित रूपमा तरलमा मिश्रण वा मिश्रण गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं यसलाई घरेलु उर्जा बारहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा दलिया र अन्य तातो अन्नहरूमा मिक्स गर्नुहोस्। पृथक सोया प्रोटीन पाउडर सूप र स्टूमा प्रोटीनको एक राम्रो बृद्धि गर्दछ
पृथक सोया प्रोटीन पाउडर को लाभ
प्रोटीन उच्च हुन्छ: पृथक सोया प्रोटीन पाउडर प्रोटीनको एक उच्च गुणस्तरको स्रोत मानिन्छ त्यसैले यो शाकाहारी र मानिसहरूका लागि आदर्श हो जो दुग्ध उत्पादनहरू लिन सक्दैनन्। यो पूर्ण प्रोटीन स्रोत हो किनकि यसमा सबै नौ आवश्यक अमीनो एसिडहरू छन्। यो कार्बोहाइड्रेट र फ्याटमा पनि कम छ किनभने यो एक शुद्ध प्रोटीन छ जो सोयाबीनबाट बनेको हो।
सोया प्रोटीन पृथक निम्न खाद्य उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिन्छ:
ऊर्जा र प्रोटीन बारहरू
वजन घटाउन तयार पेय पेय पदार्थहरू
सूप, सॉस र तयार खाना
आइसक्रीम, दही र अन्य दुग्ध वा डेरी-मुक्त उत्पादनहरू
प्रशोधित मासु, कुखुरा र माछा उत्पादनहरू
अघिल्लो: उच्च शुद्धता संरक्षक बीपी ग्रेड सोडियम बेन्जोएट पाउडर / दाना
अर्को: L-Valine पाउडर
सोया प्रोटीन पृथक, शुद्ध Ascorbic एसिड पाउडर, भिटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर, मंक फल फल, एस्कोर्बिक एसिड पाउडर बल्क, Aspartame,